လိုတာထက်ပိုပြီးအသီးအရွက်စားခြင်း၏ ဆိုးကျိုးများ - Your Fitster Health & Beauty (Myanmar)
အသီးအရွက်တွေကို ကျန်းမာရေးအတွက်အထောက်အကူပေးသောကြောင့် နေ့စဉ်ဟင်းလျာတွေမှာ မပါမဖြစ်စားသုံးလေ့ရှိကြပါတယ်။
အသီးအရွက်စားသုံးခြင်းကြောင့် တကယ်လည်းထိရောက်တဲ့ အောက်ပါ အကျိုးကျေးဇူးတွေများစွာရှိကြောင်း သူငယ်ချင်းတို့သိပြီးဖြစ်မှာပါ။
ဒါပေမယ့် တန်ဆေးလွန်ဘေးဆိုတဲ့ ဆိုရိုးစကားလည်း ရှိတယ်မဟုတ်လား? ဘယ်အရာမဆို ကန့်သက်ချက်လည်းရှိသင့်ပါတယ်။အသီးအရွက်တွေကို လိုအပ်တဲ့ပမာဏထက် ပိုမိုပြီးလွန်လွန်ကျွံကျွံစားသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ အောက်ပါဆိုးကျိုးတွေဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။
ဝိတ်ထိန်းနေစဉ်အတွင်းမှာ အသီးအရွက်ကို လိုအပ်တဲ့အချိုးအစားအတိုင်းစားသုံးလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အသီးအရွက်တွေချည်းပဲအရမ်းကာရောစားသုံးရင်တော့ သင်ဝမ်းချုပ်တော့မှာပါ။အသီးအရွက်မှာတဲ့အမျှင်ဓာတ်တွေက မစင်တုံးကိုပိုမိုမာစေပြီးအရွယ်အစားလည်းကြီးစေပါတယ်။ မစင်တုံးအပြင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အထိဝမ်းချုပ်တတ်ပါတယ်။အကယ်၍သင်က လှုပ်ရှားရှား လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်၊ ရေလည်း ၁ရက်မှာ ၂လီတာ သောက်မယ်ဆိုရင်တော့ သင် ဝမ်းချုပ်ခြင်းကို ခံစားရမှာမဟုတ်ပါဘူး။
အသီးအရွက်တွေများပြားစွာစားခြင်းကြောင့် ဗိုက်အောင့်စေတဲ့အချက် ၂ချက်ရှိပါတယ်။ ပထမအချက်က စားသုံးလိုက်တဲ့ အမျှင်ဓာတ်များစွာကို အစာချေဖို့ခက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပြီးဒုတိယအချက်က အစာချေစနစ်ကို ဖိအားပေးလို့ဖြစ်ပါတယ်။အသီးအရွက်ကြောင့် အူထဲမှာအစာအပြင် လေ ကိုပါနေရာပေးရတဲ့အတွက် ပြည့်အင့်ခြင်း၊ဗိုက်အောင့်ခြင်း၊ ဗိုက်ပူစေခြင်း၊ပျို့အန်ခြင်းနှင့် ပူလောင်ခြင်းပါ ခံစားရတတ်ပါတယ်။
အမျှင်ဓာတ်က ၂မျိုးရှိတာ သိပြီးကြပြီလား? တစ်ခုက (soluble fiber)လို့ခေါ်တဲ့ ပျော်ဝင်နိုင်တဲ့ သတ္တိရှိပြီး ရေနဲ့ထိတွေ့တဲ့အခါ ဂျယ်ပုံစံလိုဖြစ်သွားပါတယ်။ မကောင်းတဲ့ကိုလက်စထောတွေကို ပယ်ဖျက်ပေးနိုင်ပေမယ့် soluble fiber အရမ်းများသွားရင်တော့ ခန္ဓာကိုယ်ကလိုအပ်တဲ့ အာဟာရဓာတ်ကိုရသင့်သလောက်မရအောင် ၎င်းက စုပ်ယူတတ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုက ကိုယ်စားသုံးလိုက်တဲ့ အသီးအရွက်တွေဟာ အာဟာရဓာတ်အမျိုးမျိုးအဖြစ် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လိုအပ်တဲ့နေရာတွေကို ထောက်ပံ့ပေးပေမယ့် soluble fiberက ပရိုတင်း ကာဗွန်ဟိုက်ဒြိတ်နဲ့ အဆီတ်ု့ကို စုပ်ယူတတ်ပါတယ်။
အစားများများစားတာ အားရှိစေဖို့မှန်ပေမယ့် အသီးအရွက်တွေချည်းပဲများစွာစားသုံးမယ်ဆိုင်တော့ ကျန်းမာရေးအတွက်မသင့်တော်ပါဘူး။ ပင်ပန်းပြီးအားနည်းတာမျိုးခံစားရတတ်ပါတယ်။ပိုစားမိတဲ့အခါ အမျှင်ဓာတ်က အစာအိမ်မှာ သူချည်းပဲနေရာယူပြီး အခြား အာဟာရဓာတ်တွေက နေရာမရပဲ အစာအိမ်ပဲပြည့်အင့်နေမှာပါ။
ခန္ဓာကိုယ်က လိုအပ်တဲ့အာဟာရဓာတ် မမျှတတဲ့အခါမအီမသာဖြစ်ပြီး ဟော်မုန်းမညီမျှမှုလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ပရိုးတင်းဓာတ်ဟာ ကြွက်သားဖြစ်တည်ခြင်းနဲ့ ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်ခြင်းတို့အတွက် အထောက်အကူပေးပါတယ်။ ပရိုတင်းဓာတ်ကောင်းစွာ မရခြင်းက လိုအပ်တဲ့ကာဗွန်ဟိုက်ဒြိတ် ကောင်းစွာမရခြင်းနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခြားဘက်ကကြည့်ရင် အားနည်းခြင်းကြောင့် သွေးတွင်းသကြားဓာတ်နည်းပြီး စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းပါ ခံစားရတတ်ပါသည်။
၆။ဗီတာမင် D ပြတ်လပ်ခြင်း
အသီးရွက်တွေချည်းပဲနေ့စဉ်စားခြင်းက ဗီတာမင်Dကိုလိုသလောက်မရအောင်တားဆီးသလိုဖြစ်စေပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ဗီတာမင် အပြည့်အဝမရခဲ့ရင် osteoporosis လို့ခေါ်တဲ့ အရိုးပွရောဂါမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဗီတာမင်D က မိမိစားသုံးလိုက်တဲ့ အစာအဟာရမှ ကယ်လစီယမ်ကိုစုပ်ယူနိုင်ဖို့ အထောက်အပံ့ပေးတဲ့ မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဓာတ်တမျိုးဖြစ်ပါတယ်။
အထက်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ ဆိုးကျိုးများကြောင့် အစာစားရာမှာ အသားငါး နဲ့အသီးအရွက်တို့ကို မျှတစွာစားသုံးကြပါလို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
ကျန်းမာရေးနဲ့ပါတ်သက်တဲ့ ဗဟုသုတလေးတွေ သူငယ်ချင်းတွေသိစေဖို့ Like & Share လုပ်ခြင်းဖြင့် မျှဝေလိုက်ပါအုံးနော်